China Children Camping Playhouse Pop Up N'èzí Tent Ime ụlọ Playhouse Kids Play Tent factory na-emepụta | Sisili
Campmụaka Maa ụlọikwuu Playhouse Pop Up N'èzí Tent Ime ụlọ Playhouse Playmụaka Play entlọikwuu
Aha aha: Playlọikwuu na-agba agba maka ụmụaka
Agba agba: Dị ka eserese gosiri
Nha: 94 * 94 * 106cm
Uwe nwere ọtụtụ agba na-egbuke egbuke ma na-adọrọ mmasị maka ụmụaka nọ n'afọ ndụ niile, ọ nwere ike ijide ụmụ gị n'anya n'oge mbụ, ọ nwere ike inye aka kpalite echiche ụmụ gị ma mepụta ebe nzuzo mara mma maka ụmụaka gị.
Tent tentlọ egwuregwu a na-eme ohere zuru oke maka ụmụaka igwu egwu ma zuru ike. Enwere ike ịtọlite ​​ha n'ụlọ ma ọ bụ n'èzí ma nye ụmụaka mmetụta nke nzuzo na ohere onwe ha ma na-enye ndị nne na nna aka ileba anya maka nchekwa ha.
Easy Mbido & foldable na a fechaa mkpọchi uwe na-ebu akpa maka adaba nchekwa.
● Nnukwu onyinye onyinye ụmụaka.
Tinye ego na Oge Oge Oge Nkuzi nke Nwa Gị na Onye Zuru Ezu na-abụghị tv, Na-abụghị mbadamba, Na-abụghị laptọọpụ Onyinye. Ma ị nwere nke gị ma ọ bụ na-achọ ọmarịcha onyinye maka nwa nke enyi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ, ụlọikwuu egwuregwu a bụ nnukwu onyinye.
Ho Oge Obi ●tọ: Kidsmụaka ga-adọrọ mmasị na nke a na-acha uhie uhie polka dot isiokwu bọọlụ olulu na-egwu egwu ma nwee ịhụnanya na-agagharị n'ọnụ ụzọ. Mejupụta ụlọ ntu na ihe ụmụaka ji egwuri egwu kachasị amasị ụmụaka ma mee ka ụmụaka nwee obi ụtọ ruo ọtụtụ awa.
A-● Mmepụta enyi na enyi: Nha: 94 * 94 * 106cm; Ọtụtụ ohere igwu egwu! Atụmatụ ụzọ ụzọ maka idobe bọọlụ n'ime olulu bọl. Ọnụ ụzọ mejupụtara nhọrọ agbụ azụ maka idebe ya mgbe achọrọ.
Ura Inogide & Nchekwa & Mfe Easyhicha: Ejiri akwa na-adịgide adịgide nke na-ehichapụ maka ndụ ogologo oge na ntụrụndụ. Zuru okè maka ime ụlọ na n'èzí play.Our nnukwu egwuregwu ụlọ bụ nke na-emerụ Chemicals & mma maka site na ụmụaka gụnyere na-amụ ije na ụmụntakịrị. 100% anaghị egbu egbu.
Easy Setup & Fold Down: Thislọ elu a na-eme ka ọ dị mfe ịtọlite, na-esite n'akụkụ niile nke egwuregwu ahụ. Njirimara a pụrụ iche ighikota ịchekwa nhọrọ maka ewepụghị mpịachi na-adaba adaba zippered akpa mgbe ọ na-eji.
G Onyinye zuru oke: Ezigbo echiche dị mma maka ụbọchị ọmụmụ, eserese, ememme, na Sleepovers. A na-atụ aro onyinye ụmụaka ndị a maka onyinye ụbọchị ọmụmụ na Onyinye Ekeresimesi maka ụmụaka ụmụaka na-amụ ije. Onyinye Kachasị Mma maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma ọ bụ 8 afọ ọmụmụ nwata nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ.
Nke gara aga: 3 n’ime 1 Ime /lọ / Ime Playlọ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Elu
Latlọikwuu na-afụ ọkụ
Flọ Elu ụlọ
Entslọikwuu Na-ama ụlọikwuu N'èzí
N'èzí maa ụlọikwuu Cookware Set na ite na efere ...
9 na 1 Maa ụlọikwuu Mberede Ntanye Mberede
Nlanarị Fire Starter 1/2 ″ Oké 3 ″ ...
10 na 1 N'èzí Camping Mberede vlanahụ Mberede ...
Igwe anaghị agba nchara Camping Cookware Set with Wood ...
Xtm ụlọ Top tent, Starter Magnesium oku, Gear Mberede Mberede, Na-adịgide Adị n'doorlọikwuu, Inflatable ụlọ Tlọikwuu, Vlanahụ Fire Starter,